> Resource> iPhone> otú nyefee SMS si iPhone ka Moto X
Moto X bụ a e wepụtara ọhụrụ Motorola smartphone haziri ma gbakọrọ na America. Ọ bụ ndị dị otú ahụ a onwunwu smartphone dị ka iji zaghachi olu gị na-enweghị aka. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ okporo mmiri gị ochie iPhone maka Motorola Moto X, i nwere ike na-ezute a nsogbu. Nke ahụ bụ otú nyefee SMS si iPhone ka Moto X. Ruru dị iche iche nyiwe, ọ bụ n'ezie mara mma siri ike ime SMS nyefe.
Echegbula. Ihe na-agbanwe ugbu a. Ebe a bụ ihe ịtụnanya ekwentị data transfer ngwá ọrụ, ime ka ị nyefee niile ozi ederede na gị ochie iPhone ka Motorola Moto X na 1 Pịa. Ọ bụ Wondershare MobileTrans ma ọ bụ Wondershare MobileTrans maka Mac. Ugbu a, ibudata ngwá ọrụ na-eso mfe nkuzi n'okpuru iji mee ya.
Cheta na: Wondershare MobileTrans arụ ọrụ zuru okè na transfer SMS on iPhone 6S (Plus), iPhone 6 (Plus), iPhone 5s, iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 3GS na iPhone 3G ka Moto X. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iOS 9/8/7/6/5.
Otú nyefee ozi ederede site na iPhone ka Moto X
Nzọụkwụ 1: Wụnye MobileTrans na kọmputa na-agba ya
Na mmalite, wụnye onye-click ekwentị transfer ngwá ọrụ - MobileTrans na kọmputa gị. Na-agba ọsọ ka ọ na-egosi ya bụ isi window na kọmputa na ihuenyo.
Nzọụkwụ 2: Jikọọ Moto X na iPhone na kọmputa
Ina gị ochie iPhone na-egbu maramara Moto X jikọọ kọmputa na abụọ USB cables. MobileTrans Ga-ozugbo aghọta gị ekwentị abụọ, mgbe ahụ, na-egosi ha na isi window. Gị iPhone, isi iyi na ekwentị, ga-egosipụta na ekpe nke isi window, na gị lekwasịrị ekwentị - Moto X-egosi na nri.
Ọ bụrụ na ndị ekwentị abụọ na-egosipụta na-ezighị ezi na ọnọdụ, ị nwere ike pịa "tụgharịa" idozi ya. The "Doro Anya data tupu oyiri" taabụ na-eji wepụ niile ozi ederede na-eme ka ụlọ maka ndị si gị iPhone.
Cheta na: Jide n'aka na ị rụnyere iTunes na kọmputa gị.
Nzọụkwụ 3: iPhone ka Moto X ozi ederede transfer
N'ezie, MobileTrans-enyere gị aka nyefee kalenda, ederede ozi, kọntaktị, music, foto na vidiyo na Moto X na otu Pịa. Ọ bụrụ na ị dị nnọọ chọrọ nyefee ozi ederede, ị kwesịrị uncheck ihe ndị ọzọ.
Mgbe ahụ, pịa "Malite Copy". Jide n'aka ma nke gị ntị na-ejikọrọ n'oge transfer usoro. Mgbe ọ mere pịa "OK".
Bingo! Ị ọma kpọfere niile ozi ederede na ochie iPhone ka Moto X. Ya mere mfe ma adaba, ọ bụghị ya? Ugbu a, ị nwere ike ịlele ozi ederede na gị Motorola Moto X kpam kpam.
Cheta na: Mgbe a na-edegharị ozi ederede gị Moto X, ị nwere ike iji Wondershare MobileGo for Android. Ọ bụ a pụrụ iche Android njikwa,-enyere gị aka jikwaa ngwa, kọntaktị, ozi ederede, photos, music na vidiyo.
3 Ụzọ Nyefee Songs si CD ka iPhone